Tontolo_iainana · Desambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Desambra, 2011
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Desambra, 2011
Singapore: Todran-drano, sa Rano Mihandrona?
Azia Atsinanana 30 Desambra 2011
Tamin'ny 23 Desambra 2011, orambe matevina no niteraka fiakaran-drano vetivety tao amin'ny faritra maro ao Singapour, voakasik'izany ny magazay mpivarotra fehikibo be olona ao amin'ny Lalana Orchard sy ny manodidina azy. Tsy zava-nitranga nahasosotra na hoe tsy nampoizina anefa izany, satria efa niseho izay tranga izany tamin'ny volana Jiona 2010....
Singapour : Nanao Fihetsiketsehana Mba Hiarovana Ireo Alika Mpirenireny Ireo Mpitia Biby
Azia Atsinanana 29 Desambra 2011
Ireo mpitia biby ao Singapore dia nanao fihetsiketsehana mba hiarovana ny ain'ireo alika mpirenireny ao Punggol, taorian'ny fampitambaran'izy ireo ny heriny mba hanangonana ireo alika mpirenireny, izay mety ho vonoina.
Shina: Fitroarana Tao Guangdong, Ao Haimen Ankehitriny
Azia Atsinanana 27 Desambra 2011
Hatramin'izay nametrahana ny tananàn'i Wukan ao amin'ny faritanin'i Guangdong eo ambany fanaraha-maso taorian'ny fanesorana ny Antoko sy ireo manampahefana tao amin'ny governemanta izay, dia farafahakeliny tanàna roa mifanakaiky no nanao hetsika manokana. Ny vao haingana indrindra izao dia ilay nitranga androany, izay voalaza fa nahitàna olona 30.000 nibahana sampanan-dalana iray be mpivezivezy .
Filipina : Anjatony Ny Maty Sy Nanjavona Tamin'ny Tondradrano
Azia Atsinanana 23 Desambra 2011
Ny isan'ireo niharan-doza dia mety ho mihoatra izany ary mety hahatratra hatramin'ny 600. Io no tondra-drano ratsy indrindra namely iny faritra avaratry ny Mindanao iny tao anatin'ny taona maro. Ireo mponina anaty aterineto dia nampiasa teo noho eo haingana ny vohikala mba hizarana ny mikasika ilay loza voajanahary ary nanao antso ho amin'ny fanohanana
Amazonia Peroviana: Ny Fanambin'ny Zava-Mahatalanjon'ny Natiora
Amerika Latina 16 Desambra 2011
Nambara ho isan'ny iray amin'ireo zavatra 7 mahatalanjon'ny natiora ny ala mikitron'i Amazonia, fanambaràna izay andrasana hitondra tombontsoa ho an'i Loreto , faritra Peroviana ar ny tananan'i Iquitos amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany. Nefa mba niomana marina ho amin'izany ve ny faritra?
Azia Atsimo: Ny Voay Eny Anivon'ny Fampahalalam-baovao
Azia Atsinanana 12 Desambra 2011
Mamba goavambe iray tany atsimon'i Philippines sy voay maro tany amin'ny rano tondraka tao Thailand sy Kambodza no isan'ny teo anivon'ny lohatenim-baovao nibahan-toerana tany Azia Atsimo tamin'ny tapany fahaefatr'ity taona ity. Eto ny fahitàna ny sasany tamin'ireo voay sy ny tatitra tanaty aterineto.
Brezila : Onitra Faratampony Taorian'ny Fahanginana Momba Ilay Fiparitahan-tsolika An-dranomasina An'ny Chevron
Amerika Latina 04 Desambra 2011
Ny 7 Novambra, ilay "plateforme" fitrandrahan-tsolika Frade, izay an'ny orinasa Amerikana mpandavaka Chevron-Texaco, dia nanomboka namery solitany mbola tsy voahodina. Roa volana taty aoriana dia inoana fa efa voafehy ilay fiparitahana solitany ary i Chevron dia nosaziana handoa ny onitra ambony indrindra izay nofaritan'ny Manampahefana Breziliana momba ny tontolo iainana. Kanefa tsy mazava tanteraka ny mikasika ny fahasarotana sy ny momba ny loza aterak'io amin'ny tontolo iainana.